Ahoana no fomba ahafahana mijery tranonkala tsara indrindra?
Ny fividianana rindran-pototra ambony dia midika fa tsy voatery ho sarobidy ny tranonkala backlinks rehetra amin'ny fomba fijerin'ny motera Google. Izany no antony mahatonga ny tranonkala backlinks rehetra tsy dia mahasarika loatra fa ny fitaterana bebe kokoa ny fifamoivoizana (ary farany mampivelatra ny vokatra ara-barotra amin'ny ankapobeny) fa manatsara ny fahamendrehana sy ny lohatenin'ny pejy ho laharam-pahamehana ho laharam-pahamehana amin'ny vidim-pikarohana voalohany.
Noho izany, ahoana ny fomba ahafahan'ny tranokala hiverenana bebe kokoa amin'ny fandrosoana amin'ny fandrosoana, mba hitombo hatrany amin'ny tranonkalan'ny orinasanao? Mazava ho azy, tsy midika akory izany fa ny rohy kalitao dia azo raisina amin'ny solosaina afa-po amin'ny pejy voalohan'ny pejy miaraka amin'ny lanjany ambony sy ny fahefana eo amin'ireo mpampiasa tena izy.
Ankoatra izany, rehefa miasa amin'ny tranokalan'ny tranonkala mahazatra ianao dia tokony hijery tsara ny hetsika rehetra natao, mba tsy hamela ny sazy ho an'ny sazy Google izay mety ho azonao amin'ny farany Ny asa dia efa vita tanteraka. Izany no mahatonga ahy manoro hevitra manaraka ity torolàlana momba ny fampiharana fohy sy soso-kevitra tsotra ity mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny tranokalan'ny hatsikana tsara indrindra ary mahatsiaro ho tsy azo antoka ny sazy.
Mitadiava fomba hafa amin'ny torolalana fototra ho an'ny webmasters amin'ny Google. Aza misalasala manadihady ny fitsipika fototra amin'ny lalao alohan'ny hametrahanao ny fanorenana tranonkala backlinks. Miainga fotsiny mba hahazoana antoka fa tsy mandany ny fotoanao amin'ny tranokala vao haingana ianao, ary koa ireo tambajotra mampiahiahy.
Mifantoha tsara amin'ny rohy tsy voavaha sy ny lanjany lehibe indrindra. Tsarovy ity fitandremana madinidinika ity - na dia manao ny zavatra rehetra aza ianao, tsy midika izany fa afaka matoky ianao amin'ny ambin'ireo tranonkala hafa. Manana fanaraha-maso indroa fotsiny mba hahitana ny zavatra ilaina amin'ny fanivanana mba ahazoana antoka fa tsy hijaly mihitsy ny tranonkalanao.
Aza kivy mihitsy amin'ny hevitra vaovao momba ny fananganana rakitra vaovao amin'ny tranokala vaovao - ampiasao fitaovana fanaraha-maso SEO mba hanaovana fikarohana ao amin'ny votoatin'ny vohikala misy anao ary jereo izay lohahevitra mbola tsy voaresaka.Azonao atao koa ny mampihatra ireo fitaovana maotina amin'ny tenimiafina samihafa mba hahitanao vintana hafa ho an'ny votoatin'ny lahatsoratrao. Mandritra izany fotoana izany, dia afaka misafidy foana ny ezaka ataonao amin'ny famoahana votoaty amin'ny maso sy multimedia - izay hanao izany koa.
Aza misalasala mitsikilo ny tranonkalan'ny mpifaninana aminao amin'ny alàlan'ny manam-pahefana ambony. Raha tsy fantatrao hoe aiza no hanomboka hanorina ny rohy tsara indrindra - ampiasao fitaovana malaza amin'ny aterineto mba hitanisàna ireo tranonkala mitovy amin'izany mifandraika amin'ny tsenanao na ny mpihaino. Raha ny amiko, dia hitako ny fitaovana fampiasa amin'ny Alexa amin'ny endrika tsotra indrindra hahitana ny tanjona tsara ho an'ny backlinks tranonkala.
Fanamboarana fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampahalalam-baovao, ary miasa amin'ny fifandraisana am-pirahalahiana ho an'ny tanjon'ny bilaogy vahiny. Amin'izany fomba izany, afaka mandinika ihany koa ny fandefasana ny votoatinao amin'ny pejy vaovao ianao ary mandefa ny famoaham-peo manokana anao sy ny votoaty hafa manan-danja mivantana amin'ny media. Aza manantena ny fandrosoana haingana any, fa azoko antoka fa ny ezaka rehetra dia azo antoka fa aloa.
Farany, amin'ny farany, aza hadino ny hampiasa ireo fitaovam-pifandraisana amin'ny aterineto hafa mba hamerenana amin'ny laoniny ny tranokalan'ny tranonkalanao. Na izany aza, tokony tokony hanara-maso ny fandaharam-potoana ianao hanaraha-maso ny tranonkalanao matetika, mba hijanonana eo amin'ny tampon'ny fitohanan'ny fifamoivoizana Source .